Waamo National Party - Xaflad balaaran oo lagu qabtay Magaalda Oslo - Daawo | KEYDMEDIA ONLINE
Waamo National Party - Xaflad balaaran oo lagu qabtay Magaalda Oslo - Daawo
Oslo (KON) - Kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen dhammaan Jaaliyadda Degaamada Waamo ee Dalka Norway, ayaa Shalay oo ey Taariikhdu aheyd 19/10/2012, lagu qabtay Magaalada Oslo ee Xarunta Dalkaas.
Kulanka oo uu ka soo qayb galay Guddoomiyaha Xisbiga Waamo National Party ayaa waxaa hadallo munaasabadda Ku aaddan ka soo Jeediyey Waxgarad kulanka goob joog ka ahaa.
Kulan ayaa ugu horreyn waxaa lagu furay Aayado quraan ah. Kaddib waxaa goobta warbixin kooban ka soo jeediyey Guddoomiyaha Ururka Nabadda iyo Horumarka (SFUS) Mudane C/fataax Xaaji Buuxe. Wuxuu soo dhoweeyey hawlgalka Xisbiga Waamo National Party, wuxuuna u rajeeyey in Xisbigu dedaal u galo hawlaha la isugu soo dhoweynayo Somalida degaanka Waamo.
Waxaa iyaguna sidoo kale, goobta ka hadlay ogayaal iyo wax garad kale oo ay ka mid ahaayeen Axmed Cali Wacays, Siyaad iyo hooyo Fadumo C/laahi. Dhammantood waxay si qoto dheer ugu hambalyeeyeen hawlgalka Ururka Waamo National party. Intooda waxay soo jeediyen xalka arrinta Kismaayo in ay tahay in looga dambeeyo dadka degaanka, wax kasta oo dhib hor abuurayana si wadajir ah looga hortago.
Martida goobta ka hadashay ayaa baaq culus dowladda Somaliya ugu diray sidii ay deg deg wax uga qaban lahayd arrinta Kismaayo iyo goobaha kale ee lagu muransan yahay.
Suldaan Bashiir Maxamed Geelle oo isaguna goobta ka hadlay ayaa si qoto dheer uga sheekeeyey taariikhda dadka iyo degaanka Waamo. Suldaanku wuxuu si caddaan u sheegay in degaanka Waamo ay lagama maarmaan tahay in looga dambeeyo dadka degaanka Waamo, markanna aan looo baahnayn in xaqduudsi lagu kaco. Suldaanka ayaa ka digay in maamulo la soo dhoodhoobay aysan ka shaqayn karayn degmada Kismaayo iyo inta ku xeeran.
Sidoo kale, Suldaan Bashiir ayaa somalida Norway kula dardaarmay in ay gacmaha is qabsadaan iyo ay si buuxda ula shaqeeyaan dalladda Somalida ee ka shaqaysa dalka Norway ee SPIN.
Intaa dabadeed waxaa hadalka Qaatay Guddoomiyaha Xisbiga Waamo National Party Mudane Cali Maxamed Muuse (Cali Jiim). Guddoomiyaha ayaa goobta ka jeediyey hadal ay ka soo qayb galayaashu aad ugu riyaaqeen. (hoosta ka akhri khudbada Guddoomiyaha oo qoraal ah).
Kulanka ayaa ku soo dhommaaday jawi aad u wanaagsan.
Khudbadda Guddoomiyaha Xisbiga Waamo National Party
Oslo: Jimce: 19/10/2012
Aad iyo aad ayey ii farxad gelinaysaa in aan kulankan qiimaha badan ka soo qayb galo. Mahad oo dhan Eebbe ayaa iska leh, marka xiga aan u mahad celiyo xubnaha rag iyo dumar isugu jira ee hawshan baaxadda leh isku soo dubariday.
Marka hore, waxaan soo dhoweynayaa walaalaha meelaha fog fog naga soo booqday sida, Bergan iyo Stavanger ee dalka Norway iyo walaalaha kale ee ka kala yimid wadamada Sweden iyo Denmark. Walaalayaal dhammaantiin waxaan si diiran idiinku soo dhoweynayaa kulankan xiisaha badan, waana ku mahadsan tihiin waqtigiina qaaliga ah oo aad noo soo hurteen.Inta aynaan u gelin dhismaha Xisbiga Waamo aynu wax yar taariikh-dhismeedka Xisbiga dib u milicsanno. Xisbiga Ummadda Waamo (Waamo National Party), ma ahan mid iminka cusub, balse waa mid dhismihiisu horay u jirey.
Xisbiga Waamo wuxuu saldhiggiisu ka soo farcamay dhismaha Ururka Waamo, oo 15kii Bishii Agoosto 1997 lagu aasaasay magaalada Muqdisho, isagoo ay u dhammaystiran yihiin hay'adihiisa hoggaamineed. Waxaana Guddoomiye u ah Mr. Cali Maxamed Muuse (Cali Jiim).
Ilaa iyo muddadaas Xisbigu wuxuu dadaal ugu jirey sidii looga dhabayn lahaa hadafka Xisbiga oo ku jahaysan dhowr qodob oo ay ka mid yihiin:-
In gebi ahaan la sugo xaqa ay ummadda degaanka Waamo u leedahay jiritaankooda.
In laga hortago khataraha sida joogtada ah uga yimaada dadka soo galootiga ah.
In loo istaago meel marinta rabidda dadka degaanka, iyadoo tixgelin la siinayo shucuubta kale ee ku dhaqan degaanka.
In laga shaqeeyo sidii nabadda loo adkayn lahaa, iyadoo si siman maamulka loo qaybsanayo.
In lagu tallaabsado sidii looga faa'ideysan lahaa khayraadka ceegaaga dhulka Waamo.
In dadka xaqooda la boobay loo soo celiyo, kuwa wax boobayana laga horjoogsado.
In la adkeeyo midnimada iyo isku duubnida Ummadda Somaliyeed.
In la tiigsado sidii horumar looga samayn lahaa dhinacyada siyaasadda, Dhaqaalaha iyo arrimaha Bulshada.
Xisbiga Waamo wuxuu leeyahay Gole dhexe oo ka kooban ilaa 50 xubnood, wuxuuna leeyahay Guddi fulin oo isaguna ka kooban 12 xubnood. Xisbiga Waamo wuxuu leeyahay Barnaamij iyo xeer hoosaad ay ku urursan yihiin aragtida ay dadkiisu qabaan. Dukumentiga Xisbiga Waamo waxaa si waadax ah ugu cad qorshaha dhow iyo kuwa fog ee lagu tiigsanayo aayaha ummadda degaanka Waamo. Dhowaan ayaan Inshaa Allaah idin soo gaarsiin doonaa dukumentiga oo dhammaystiran.
Xisbiga Waamo wuxuu ka dhisan yahay dalka Somalia gudihiisa isagoo xafiisyo ka furan doona North Ameerika, Yurub, Afrika iyo Aasiya. Xisbiga Ummadda Waamo oo ka mid noqonaya, haddaanuba ugu horreyn Axsaabta siyaasadeed ee Somaliya ka hawl geli doona, wuxuu il gaar ah ku eegi doonaa gardarooyinka iyo dulmiga laga geystey deegaamada ay ka mid yihiin Waamo, J/hoose, J/dhexe iyo Sh/hoose.Waynu wada ogsoon nahay dhibaha ba'an ee muddada dheer ka soo jirey deegaamada Waamo ilaa iyo taariikh hore.
Waxaa deegaamadaas gacanta ku dhigay niman deegaanka lagu soo dhoweeyey. Iyaga iyo kuwa kale oo aad isu kaashanaya ayaa si boob ah degaanka u hantiyey, wixii maamullo ahaa ee ka dambeeyeyna waaba sii adkeeyeen. Bulshooyinkii ku dhaqnaa deegaamada Waamo waxay noqdeen wax la dilay, wax la dhacay, wax la eryey oo naftooda la baxsaday iyo qaar mustacmarad siloon oo isir suulin ah loo geystey.Sidii horayba loo yiri, baadi kugu raagta xoolahaaga ayaad moodaa. Nimankii gefkaas geystey iyo kuwii gefkaas ugu hiiliyeyba muddada dheer ee ay maalmo dhaxa ku joogeen degaamada Waamo, waxay ula noqotay in ay iyagu leeyihiin dadka iyo deegaankaba. Waxay ku tallaabsadeen in ay mustacmaradooda iinta leh ay weli hadlkeeda ka sii wadaan, iyagoo markaan xitaa u gudbay in ay dowlado iyo dadyow kale heshiisyo kula galaan dal iyo deegaan aanay ab iyo isirtoona u lahayn.Walaalayaal, Xisbiga Waamo waxaa u muuqata in tallaabooyinka ka socda deegaamada Waamo aanay ahayn wax loo sii dulqaadan karo.
Xisbiga Waamo waxaa u muuqata in falalka isticmaar ee maanta ka soo ifbaxaya degaamada Waamo ay yihiin kuwa aanay cidina qaadan karin, annaguna haddaanu nahay dadka degaamada Waamo arrintaas waanu diidnay, ma oggolin ayaanu leenahay. Ma oggolin in ay sii jirto mustacmaradda degaankaas muddaba ka soo jirtey. Xisbiga Waamo waxaa u muuqata in la soo gaaray xilligii la soo afjari lahaa dulmiga, ducfiga iyo dibindaabyada in muddo ahba ka jirtey deegaamada Waamo.
Waxaa wax lala yaabo noqonaysa in dad dool ku yimid, oo dulmi kii ugu foolxumaa geystey waqti aad u dheer, in qarnigan 21aad oo caalamka uu gabaabsi ka sii yahay gumeysi nooc kastuu yahay, ay mar kale u soo hanqal taagaan in ay Ummad dhan xaqooda duudsiyaan. Xisbiga Waamo wuxuu si aan mugdi ku jirin u caddeynayaa in tallaabadaas aan sina loo aqbali doonin. Wax kasta oo ay nagu qaadatana waxaanu ka dhabayn doonaa in xaqa aasan dib loo soo saaro, oo ay runi run gaarto.
Baaq uu Xisbiga Waamo National Party ka soo saarayo arrinta Kismaayo
Magaalada Kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka Somaliyeed. Maanta Somalia waxay tahay dowlad ka baxday KMG-nimada. Iyadoo wax laga murugooda ay tahay in tuhun iyo mugdi la geliyo degaamo Somaliyeed, ayaa haddana Xisbiga Waamo wuxuu taageersan yahay soona dhoweynayaa in maamul u samaynta Gobolka iyo magaalada Kismaayo looga dambeeyo dowladda Federaalka Somalia. Waxaan Madaxweynaha Somalia Mudane Xasan Sh. Maxamuud ugu baaqaynaa in arrintaas dowladdu ay u soo degdegto, iyadoo maamul u samaynta Kismaayo ay ka soo xulayso si xaq ah dadka degaanka.
Waxaan soo dhoweyneynaa Ciidamad AMISOM oo ah kuwo ka farriimo qaata dowladda Somalia iyo ciidamada Xoogga dalka Somaliya oo isgarabsanaya tallabada ay maleeshiyaadka Alshabaab uga saareen magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Waxaan soo dhoweyneynaa Baaq ku aaddan maamul u samaynta magaalada Kismaayo oo ay taariikhdu markay ahayd 9/10/2012 ay soo saareen waxgarad ay ka mid yihiin: Suldaanka Beesha Wardey Suldaan Maxamed Buulle Jiirow, Ugaaska Beesha Wardey Ugaas Shide Dhimbil Maxamed, nabadoon Maxamed Qaasim Macallim, Xildhibaan Cali Xasan Guyow, Xildhibaanad Ummadda Direed, aqoonyahannada ay ka mid yihiin Faarax Salaad Boorow, Eng. C/risaaq Xasan Geedi iyo Haashim Sh. Mahdi, Siyaasiyiin, culamaa'udiin, dhallinyaro iyo haweenka beesha Wardey oo isku duuban.
Baaqaas oo ay uga soo horjeesteen in koox yar oo dallaaliin ah ay masiirka iyo maamulka Kismaayo ay si gaar ah u leexsadaan.Sidoo kale, waxaan soo dhoweyneynaa baaq ku aaddan maamul u samaynta Kismaayo oo ay soo saareen waxgarad ka soo jeeda degaanka Waamo 7/10/2012, kuwaas oo ay ka mid yihiin: Suldaan C/weli Xaaji A/rahman. Ugaas Sayid Ali C/lahi Ciise, Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Xuseen Carab Ciise, qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia. Baaqaas ayaa lagu sheegay in maamul u samaynta Kismaayo looga dambeeyo dowladda Federaalka Somalia.
Waxaan kaloo soo dhoweyneynaa baaq ku aaddan maamul u samaynta magaalada Kismaayo oo ka soo baxay dowladda Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaciil Cumar Geelle, Xukuumaddiisa iyo shacabkiisa oo isku duuban, waxay caalamka iyo hay'adaha arrimaha Somaliya ay khusayso u caddeeyeen in arrimaha Jubooyinka looga dambeeyo dowladda Somalia. Baaqaas waxaa jeediyey Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee dalka Jabuuti Mudane Xaamud Cabdi Suldaan.Intaa dabadeed, walaalayaal, Xisbiga Waamo wuxuu si weyn u cambaareynayaa maamul xaafadeedka dhowaan Kismaayo laga sheegay iyo cid kasta oo fikirkaas qaldan taageerta, kaas oo aan u aragno mid wadciga maanta aan la shaqayn karin. Waxaan leenahay yaan lagu hodmin aragtida gaaban ee horboodayaasha soo galootiga ah ay indhaha wax magaradka ku beerlaxawsanayaan.
Waxaan ka digaynaa waxa ay wadaan dallaaliinta damac doonka ah iyo kuwa taageerayaba oo had iyo goor iska indha tira xaaladda runta ah ee ay degaamada Waamo ku sugan yihiin.Xisbiga Waamo wuxuu ka digayaa in mar kale colaado iyo ciilqab-horay u jirey dib loo soo nooleeyo. Waxaan ka digaynaa in nabadda khal khal la geliyo oo mar kale bulshada degaanka la iska horkeeno, kolkaas oo ay dhici karto in uu yimaado dhib aanan sina loo qiyaasi karin saamaynta uu yeelan karo, markaa oo laga yaabo in xal u heliddiisuba ay adkaato.
Xisbiga Waamo wuxuu qabaa haddiiba ay jirto cid ka sokeysa dowladda Federaalka Somaliya oo u hanqal taagaysa maamul u samaynta Kismaayo, markaas Xisbiga Waamo weeye kan ugu xaq leh, isaga ayaana Maamulka gobolka iyo kan degmadaba soo dhisi doona Inshaa Allaaah, dabcan isagoo tixgelin siin doona bulshooyinka degaanka. Haddii cid kale ay si ku danaysi ah u boobto talada, oo ay maamul jajuub ah ugu samayso Kismaayo, markaas waxaanu caddeyneynaa in Xisbiga Waamo National Party aanu sinnaba u oggolaan doonin oo aanaan aqoonsan doonin maamulkaas boobka ku salaysan iyo cidda wadataba.
Walaalayaal, taageerayaasha Xisbiga Waamo meel kasta oo ay joogaan, waxaan u sheegeynaa in maanta la soo gaaray xilligii fadhiga laga kici lahaa, oo bulshada wax lala qabsan lahaa.
Waxaa la soo gaaray xilligii gacmaha la is qabsan lahaa oo mustaqbalka ummadda degaamada Waamo si fiican la isugu duwi lahaa. Waxaan idin xusuusinayaa, haddii muddaba la sugaayey in dadka degaanka Waamo ay u istaagaan dhismaha mustaqbalkooda iyo in ay aayahooda ka tashadaan, maanta waanu u taagan nahay arrintaas. Sidaas darteed, taageerayaasha Waamo National Party iyo inta samaha jecel waxaan ka codsanaynaa in hawshaas ay nala garab galaan oo nagu taageeraan.
Xaqu waa Guuleysan goor ay noqotaba!!!!
Qalad farsamo Awgeed, Masawiradaan weeye kuwa Saxda ah oo ey ka muuqdaan Madaxda Waamo National Party!